आधुनिक सौन्दर्य स्तर सिद्ध आंकडा, chiseled सुविधाहरू, चिल्लो छाला टोन र भव्य मुस्कान: झन् उच्च मानक खडा गरेर। सौन्दर्य चल्छ र चिकित्सा को उद्योग संग गति राखन: यो उपस्थिति संग वस्तुतः कुनै पनि समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्न सक्छ। र यदि पहिले नमिलेका दाँत र overbite वाक्य वस्तुतः थिए, तर आज यो समस्या एक शब्द मा हल छ: ब्रेसहरू। के छ, जसले तिनीहरूलाई लगाएका देखाइएको छ र वा छैन राख्न यी डिजाइन चोट - बुझ्न प्रयास गर्नुहोस्।
कोष्ठ सिस्टम - व्यक्तिगत रोडा र असमान दाँत पङ्क्तिबद्ध को समस्या सम्बोधन उद्देश्य Tailored खुराक छ।
आवश्यकता र उपचार को यो विधि प्रयोग गरेर को संभावना मा एक निर्णय ओथडोटिस लाग्छ। उहाँले आवश्यक परीक्षा र परीक्षण, एक्स-रे सहित पूरा गर्नुपर्छ, र त्यसपछि एक व्यक्ति स्थापना चयन र ढाँचा लगाउने।
बाह्य धनुकोष्ठ सिस्टम अक्सर एक धातु लगातार चाप संयुक्त प्रत्येक दाँत मा "ताले" जस्तो देखिन्छ। नयाँ प्रविधिहरू कारण अन्य सामाग्री प्रयोग गर्न तिनीहरूलाई कम सजिलै देखिने बनाउन।
को ओथडोटिस को झुकाव को डिग्री आधारमा तल्लो वा माथिल्लो चिबुक वा दुवै एक साथ मा ब्रेसहरू स्थापना सल्लाह गर्न सक्छन्। प्रणाली को जीवन लगाउने र व्यक्तिगत चुनिएको छ, तर औसत 24 महिना छ।
ब्रेसहरू राख्न कसरी दर्दनाक, हामी केवल प्रक्रिया पछि भन्न सक्नुहुन्छ, तर कुनै पनि मामला मा, विशेषज्ञहरु प्रक्रिया असहज, तर पीडादायी हुन सक्दैन भनेर भन्न।
जब तपाईं ब्रेसहरू सोच्न आवश्यक?
कुनै पनि परिवर्तन सर्वोत्तम प्रारम्भिक चरण मा आयोजित गरिन्छ। अर्को शब्दमा, मा साना उमेर कोष्ठक भन्दा तिनीहरूले लगाएका गरिनेछ थप प्रभावकारी सेट, र कम समय सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न आवश्यक छ।
तर dentition को झुकाव कुरा मात्र अनित्य दाँत मूल को प्रतिस्थापन पछि सम्भव छ। अक्सर समस्या प्रारम्भिक किशोरावस्था मा देख्न सकिन्छ।
धेरै किशोर को ओथडोटिस भ्रमण एक सरल प्रश्न लिन्छ: "? यो उमेर 12 मा ब्रेसहरू राख्न दुख्छ के (13, 15, आदि ...)" यो त एउटा सानो मूल्य आत्म-विश्वास र पछि जीवन भर एक बोल्ड मुस्कान भुक्तानी गर्न छ - मामूली बेचैनी अब बच्चा गर्न व्यक्त गर्न - यो चरण मा आमाबाबुको कार्य।
सही खानको र dentition हुन सक्छ र एक वयस्क रूपमा, तर यो थप समय र प्रयास हुनेछ। तसर्थ, म ब्रेसहरू 12, 14 वा 15 वर्ष डाल चोट बारेमा बच्चा एउटा प्रश्न सुनेर तपाईंले यो के गर्न सल्लाह दिन्छ गर्न सुरु गर्न आवश्यक र एक विशेषज्ञ एउटा यात्रा पन्छाउन छैन।
ब्रेसहरू स्थापना गर्न तयार
तपाईं ब्रेसहरू राख्न निर्णय भने तपाईं एक सानो प्रशिक्षण मार्फत जान आवश्यक छ। यो प्रक्रिया को सुरक्षा र दक्षता सुनिश्चित गर्नेछ।
दन्त चिकित्सक। विशेषज्ञ क्षय, खराब fillings र tartar लागि मौखिक गुहा जाँच्न गर्नुपर्छ। दाँत को ब्रेसहरू एक पूर्ण स्वस्थ मौखिक गुहा मा राखिएको रूपमा व्यवहार गर्न आवश्यक भएमा।
Periodontics। ब्रेसहरू लगाएका गर्दा गिजा वृद्धि तनाव अनुभव छन्। डाक्टर पछिल्लो अवस्था आकलन गर्न र आवश्यक भएमा तिनीहरूलाई बलियो बनाउन हालतमा सिफारिस गर्न सक्षम हुनेछ।
ओथडोटिस। को सफलता मा एक प्रमुख भूमिका दाँत को पङ्क्तिबद्ध उहाँलाई हौं। एक ओथडोटिस एक एक्स-रे बनाउन र कोष्ठ सिस्टम सेट को योजना मा निर्णय लिन एक सर्वेक्षण सञ्चालन गरिएको छ। डाक्टर प्रक्रिया, हेरविचार र स्वच्छता, वेयर को समय को पाठ्यक्रम बारे विस्तृत बताउन पर्छ। उहाँले म ब्रेसहरू चोट राख्नु, र तपाईं भन्नेछु यो प्रक्रिया कहिलेसम्म लिन्छ, पनि बताए।
प्रक्रिया अन्तिम परिणाम ओथडोटिस मा ठीक निर्भर रूपमा, एक विशेषज्ञ को चयन गर्न धेरै ध्यान र responsibly नजिक हुनुपर्छ।
चोट वा छैन?
जब सबै प्रिपेरेटरी चरणमा पारित गर्दै छन्, दाँत मा एक विशेष डिजाइन को स्थापना को दिन। रोगी चोट ब्रेसहरू राख्न चाहे को प्रश्न गरौं गर्दैन। यो माध्यम गएका छन् जो विरामीहरु को समीक्षा, प्रक्रिया मा एक सुखद पर्याप्त सुझाव। तथापि, तीव्र दुखाइ, दुवै दन्त क्षय वा इंजेक्शन को उपचार मा, कुनै।
वास्तविक प्रक्रिया विशेष टास्ने संग प्रत्येक दाँत गर्न ओथडोटिस हुक वा कोष्ठक secures छ। कि पछि, हुक vdevaetsya धातु चाप "माथि लाइन" सही दिशा मा दाँत।
यो एक प्रेस कार्य प्रदान गर्दछ, त्यसैले रोगी nagging, नीरस दुखाइ बाधा हुन सक्छ। तर प्रारम्भिक निराश गर्न - समय यसलाई unnoticed बित्दै।
कोष्ठक बरु laborious र लामो स्थापना को लागि प्रक्रिया। औसत मा, यो लगभग2घण्टा लाग्छ।
प्रणाली को पहिलो दिन
म चोट ब्रेसहरू राख्नु? यो प्रविधिको मद्दतले दाँत गर्ने लहरै मान्छे को समीक्षा, मुख्य बेचैनी पहिलो हप्तामा स्थापना पछि अवलोकन भन्छन्।
Dentition तिनीहरूलाई मा स्थिर दबाव प्रयोग प्राप्त र aching sensations प्रतिक्रिया। रोगी गरेको दुखाइ संवेदनशीलता आधारमा थप वा कम vex हुन सक्छ। एक कम दुखाइ सीमा र एक उच्च संवेदनशीलता स्वागत विशेषज्ञ मानिसहरूलाई समय habituation मा painkillers सिफारिस हुन सक्छ। शायद सही स्थापित छैन: तर, दुखाइ स्थापना को मिति देखि सात दिन पछि रहि रह्यो भने, यो आवश्यक चिकित्सकको सल्लाह छ।
साथै, कसरी दुख को मुद्दाको बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ मानिसहरूलाई म ब्रेसहरू राख्नु, लायक छ सुरुमा प्रणाली को तत्व मौखिक mucosa चोट लाग्नु र कुराकानी बाधा गर्न सक्ने चेतावनी गर्न।
यो समस्या एक विशेष मोम प्रयोग गरेर निर्मूल छ। पहिलो, तपाईं चिल्लो गर्न क्षेत्रहरु hindering मिलाइएको पछि आउँछ र कोष्ठक अब महसुस गर्दै आवश्यक छ।
प्रमुख परिणाम - ख्याल र सरसफाइको
लामो लगाएका ब्रेसहरू मा निर्णय र आफ्नो स्थापना को प्रक्रिया हेरविचार को नियम को हुनुपर्छ धेरै सचेत पारित मानिस।
यस मामला मा मौखिक स्वच्छता को लागि, दुई पटक दैनिक दाँत लिंदा छैन पर्याप्त छ। प्रणाली को तत्व जीवाणुहरु लागि प्रजनन भूमि रूपमा गर्दछ खाना को सानो टुक्रा हुन सक्छ। तपाईं पनि एक दांत कोट्याउने सिन्का को सम्पत्तिको मास्टर गर्नुपर्छ, यो ब्रेसहरू लागि विशेष ब्रश र टूथपेस्ट प्रयोग गर्नुपर्छ। बलियो पानी दबाव सबै ठीक कणहरु को मौखिक गुहा मा बाँकी flushes एक उपकरण - धेरै विशेषज्ञहरु प्रयोग गर्न सिफारिस गर्छौँ irrigator।
वाहक ब्रेसहरू हार्ड फल र तरकारी क्षति सक्दैन: तिनीहरूले गर्न टुक्रा मा पूर्व-कट गर्न आवश्यक छ। यो पनि टाँसिएको र gummy कैंडी र मिठाई खाने जोगिन राम्रो छ - तिनीहरूले अवशेषहरु बिना सफा गर्न धेरै कठिन छन्।
को ब्रेसहरू हटाउन र हँसिलो
बित्तिकै विरामीहरु मा एक उपयुक्त समय-अधिग्रहण प्रणाली ब्रेसहरू दुख दमन, बिस्तारै अर्को बदलिएको राख्न चाहे को प्रश्न रूपमा: "यो तिनीहरूलाई गोली कि दुख्छ?"।
यहाँ, दुवै पेशेवरों र बिरामीको एकमत छन्: संरचना पूर्ण पीडारहित हटाइएको छ।
प्रणाली एकै समयमा माथिल्लो र तल्लो चिबुक मा स्थापना गरिएको थियो भने, त्यसपछि उनीहरूले अलग केही हप्ता संग, एक द्वारा एक हटाइनेछ भनेर थाहा हुनुपर्छ। को चिबुक बिस्तारै धातु Arcs को समर्थन बिना नयाँ स्थिति अनुकूल भनेर यस गरेको छ।
जीवन ब्रेसहरू पछि
पछि जब यो हटाइएको छ बिरामीको मुख सजिलो र खुशी साथ अभिभूत मा लगाएका धातु सिस्टम लामो समयसम्म। तर निको प्रक्रिया यस मा अझै समाप्त भएको छैन।
हड्डी संरचना को मृदुकरण बिकृति छ गर्न, ओथडोटिस विशेष चिकित्सा mouthpiece लगाउन सिफारिस गर्नेछ। यसलाई पारदर्शी प्लास्टिक बनेको र दाँत देखिने छ।
को ओथडोटिस लगाएका सर्तहरू व्यक्तिगत चयन। सामान्यतया लगातार प्रयोग धेरै महिना आवश्यक छ। त्यसपछि, यो चिकित्सक मात्र nighttime अवधिमा मुख गार्ड लगाएका सिफारिस हुन सक्छ। तपाईं खुवाउने शासन, ब्रेसहरू लगाएका समय समान पालन गर्नुपर्छ: हार्ड क्षति छैन, छैन पागल र बीउ gnaw, सकेसम्म मीठो दुरुपयोग छैन।
यो चरण मा यो किनभने यो दाँत पंक्तिबद्ध भारी काम गरेको छ, अन्त सम्म सबै डाक्टर 'सिफारिसहरू पालन गर्न महत्त्वपूर्ण छ! यो सबै नाली जान्छ भने धिक्कार छ छ।
डाक्टर गर्न भ्रमण ढिलाइ छैन - तपाईंले आफ्नो खानको को evenness, वा मुस्कान बारे चिन्तित हुनुहुन्छ भने, वा किनभने आफ्नो दाँत बच्चा लजालु मुस्कान छ कि लाग्छ। म ब्रेसहरू राख्नु र कि जस्तै तिनीहरूलाई लगाउने कसरी दुख सोच्न अतिरिक्त समय लायक छैन। आज चिकित्सा धेरै कुराहरू सक्षम छ: आफ्नो पक्षमा एक सानो प्रयास र चिकित्सा र स्वस्थ सीधा दाँत आफ्नो सारा जीवन मनोरंजन हुनेछ।
यो दुखाइ संग दाँत कुल्ला: व्यावहारिक सल्लाह, र प्रभावकारिता समीक्षाएँ
Cermets अन्तर्गत Dissection दाँत: प्रविधि सुविधाहरू
क्राउन-ढाला धातु: तस्बिर, समीक्षा, स्थापना। दाँत गर्न धातु crowns को उत्पादन
सितारहरूले हामीलाई कतातिर हेर्छन्? लिब्रा र वृषभको ज्योतिषी संगतता
Facings - यो ... लक्ष्य र उद्देश्य
पाल छुट्टी: लाभ र सुविधाहरू
सुन्दरता। विगत देखि व्यञ्जनहरु